९ वर्षकी बालिकाले फोन गरेर यस्तो भनेपछि लखनउ देखि युपी सरकार थर्कमान, प्रहरी घरमा पुगेपछि बुवाआमा छक्क - Sidha News
एजेन्सी। भारतमा एक ९ वर्षको बालिकाले गरेको फोनका कारण लखनउ देखि युपी सरकार सम्ममा हलचल भएको छ। भारतको रामपुरकी ९ वर्षकी बालिकाले युपी सरकारको कन्ट्रोल रुपमा फोन गरेर आफुहरु खान नपाएर भोकै मर्न लागेको खबर सुनाएपछि हलचल मच्चिएको हो । लामो समय देखि लकडाउनका कारण आमाबुवा काममा जान नपाएको र घरमा भएको खानेकुरा पनि सकिएपछि आफुहरु भोकै मर्न लागेको भन्दै ९ वर्षकी बालिकाले फोन गरेकी हुन्।
जव प्रहरी त्यो बालिकाले भनेको ठेगानााम ठूलो राहत लिएर गयो अवस्था अर्कै थियो । बालिकाले मजाक गरेर त्यो नम्बरमा फोन गरेकी थिइन् । जव प्रहरीको ठूलो समुह राहत लिएर ढोकामा पुग्यो बालिकाका आमाबुवा छक्क परे । यो कसरी भयो ? भनेर प्रहरीलाई उनीहरुले प्रश्न राखे । प्रहरीले प्रदेश सरकारको कन्ट्रोल रुपममा फोन गरेर कसैले खान नपाएर मर्न लागेको जानकारी गराएपछि सरकारको आदेशमा आफुहरु राहत लिएर आएको बताएपछि उनका बुवाआमा छक्क परेका थिए।
ति बच्चीका बुवाले आफुहरुले घरमा कोरोनाका कारण गरिबहरुलाई यस्तो समस्या परेको छ भनेर कुरा गरेको सुनेकी छोरीले त्यो नम्बरमा फोन गरेको हुनसक्ने बताए । उनले आफुहरुको कुराकानीका क्रममा कन्ट्रोल रुपमका नम्बर भनेको र छोरीले त्यही नम्बरमा फोन गरेकोब ताए । उनीहरुले विपन्नहरुले यो नम्बरमा फोन गरेपछि खानेकुरा पाइन्छ भनेर कुरा गरेको सुनेको भएर छोरीले त्यसै गरेको बताए।
‘मैले एक बर्षका लागि हस्तमैथुन छाडेको थिएँ’ मलाई के कस्ता लाभ मिल्यो ?
छोराको विवाह गर्न पुगेका बुबाले सम्धीनी लिएर फरार
क्रिस्टियानोले किने संसारकै सबैभन्दा महँगो कार, विश्वभर उक्त कारको उत्पादन १० वटा मात्र
फेला पर्‍यो अनौठो दुर्लभ पहेंलो कछुवा
४ महिनादेखि एयरपोर्टमा फसे विदेशी, यसरी बिताउँदैछन् दैनिकी